4-Chlorodehydromethyltestosterone Soo-saareyaasha budada & Shirkadaha - Warshadaha
Xoojinta murqaha muruqyada iyo awoodda jidhka-dadka isticmaala afka Turinabol waxay soo sheegaan in ay awoodaan inay yeeshaan murqaha saafiga ah xitaa ka dib marka ay qaadaan wareegyada wareegista muruqyada ayaa weli ah mid cakiran. Sidoo kale, dadka isticmaala badan waxay soo sheegaan kororka xoogga jirka kuwaas oo ka caawiya inay shaqeeyaan saacado dheer iyo si dhakhso ah u helaan natiijooyinka la rabo.
Daawada Raw 4-Chlorodehydromethyltestosterone (2446-23-3) video
Roog 4-Chlorodehydromethyltestosterone budada (2446-23-3)
Chlorodehydromethyltestosterone waa aamus nabdoon oo badanaaba lagu tilmaamaa inuu leeyahay hanti gaar ah oo u dhexeeya Dianabol, iyo Anavar. Turinabol ma awoodo in uu aromatase galo estrogen, sidaas darteed saameynta daawooyinka estrogenic waa mid dhif ah, hase yeeshee warbixinno qaar ayaa la siiyay calaamado khafiif ah oo gynokomastia ah. Sababta dhabta ah looma hubin, laakiin waxaa suurtogal ah in Turinabol uu leeyahay waxoogaa ficil ah oo ku saabsan daaweeynta estrogen. Suurtagalnimada kale waa maaddada methyltestosterone inta lagu jiro habka wax soo saarka. Dhibaatooyinka 'Androgenic' weli waa suurtagal, laakiin uma badna inay noqdaan kuwo daran.
Dufanka 4-Chlorodehydromethyltestosterone waa C17 alpha alkylated steroid, sidaa daraadeed suurtogalnimada beerka waa in la tixgeliyaa marka la qorsheynayo wareeg ah oo ay ku jirto. Hawlgalkeeda wanaagsan ee lagu ilaaliyo qiyaasaha macquulka ah iyo mudada isticmaalka waa inay ku koobnaadaan hareeraha 6 si looga fogaado hepatotoxicity. Sidoo kale isticmaal dheef-shiid kiimikaad ee beerka.
Root 4-Chlorodehydromethyltestosterone budada (2446-23-3) Smamnuucista
Product Name Root 4-Chlorodehydromethyltestosterone budada
Magaca Kiimikada Turinabol afka; 4-Chloromethandienone
brand NAme Turinabol afka
Molecular Wsideed 334.88
barafku Psaliid 225-230 ° C
Fdib u soo celinta Psaliid 234.32 ° F
Biological Life-Life saacadood 16
SOlubility Dhaqan ahaan waa la xallin karaa
biyaha, si xor ah u foori kara
chloroform, dhibic yar
Application Waa xiniinta 4-chloro-la beddelay ee methandienone (dehydromethyltestosterone).
Waa maxay budada X-4-Chlorodehydromethyltestosterone (2446-23-3)?
Turinabol (2446-23-3) waa steroid anabolic kaas oo lagu sameeyo iyada oo loo badalayo Dianabol. Steroid waxaa la soo saaraa laba isku-mid ah kiimikada Clostebol (4-chloretesterone) iyo Dianabol. Taasi waa sababta ka dambeysa magaca kiimikada ee Turinabol 4-chlorodehydromethyltestosterone. Isbeddelada qaab-dhismeedka kiimikada ayaa waxay bixiyeen guryaha daroogada ee ka dhigaya midka kale ee steroids sida adigoo aan sifuddheer lahayn oo leh qiimeyn aad u yar oo asrojen ah. Daroogadaasi waxay leedahay taariikh soo jiidasho leh oo ka dambeysa iyada oo sharraxaysa kor u kaca iyo lumitaanka suuqa.
Sidee budada 4-Chlorodehydromethyltestosterone (2446-23-3) shuqullada
Sidii kale ee stabiyada kale ee anabolic, Turinabol (2446-23-3) wuxuu saameyn wanaagsan ku yeeshay xajinta nitrogen-ka iyo dheellitirka borotiinka iyo sidoo kale kordhinta wax-soo-saarka unugyada dhiigga cas ee jidhkaaga. Dhammaan kuwan, guryaha waa lagama maarmaanka u ah hagaajinta jawiga anabolic. Caadi ahaan, unugyada borotiinka waa qaybta ugu muhiimsan ee dhismaha muruqyada leh qalabku wuxuu masuul ka yahay qiyaasta unugyadaada ay ku dhistaan ​​borotiinno leh xajinta nitrogen ka ciyaaraya door muhiim ah oo ku jira qaabka unugyada cagaaran.
Dhanka kale, unugyada dhiigga cas ee mas'uul ka ah bixinta unugyada jirkaaga ee leh oksijiin adiga oo dhiigaaga isticmaalaya. Inta badan unugyada cas ee casriga ah ee nidaamka jirkaaga ayaa ah mid ka mid ah bixinta oksijiin iyo nafaqo qaybo kala duwan oo jirka kor u qaadaya murqaha jirka. Dhammaan waxqabadyada jirka waxay muhiim u yihiin jirkaaga sida ay u hagaajinayaan muruqyada iyo sidoo kale kor u qaadista unugyada. Tani waa sababta dhalinyaro badani ay wali door bidaan Oral Turinabol oo ku jira steroids kale.
Root 4-Chlorodehydromethyltestosterone budada (2446-23-3) Qiyaasta
Oral Turinabol wuxuu leeyahay qiyaas ahaan kala bar qiimeynta anabolic testosterone iyo inta u dhaxaysa 40 ilaa 60mg maalintii; Si kastaba ha ahaatee, dhakhtarkaagu wuxuu kugula talin karaa haddii kale baaritaanka xaaladdaada caafimaad. Isticmaalayaasha Turinabol ee adag, qiyaasta waxay noqon kartaa mid aad u sarreeya sida 80 ama 100mgs maalintii. Qaar ka mid ah jir-dhiseyaasha ayaa sheeganaya in saameynada daroogada ay sii kordhi karto marka aad qaadato qiyaasta sare, laakiin waxa fiican ayaa ah in guulaha ay sii wadi doonaan.
Dunida caafimaadka, qiyaasta Turinabol badana waa ay hooseeysaa, waxaana bukaanku ku talinayaa in uu qaato 5 ilaa 10mg maalintii si loo helo muruqyada lafaha ama lafaha. Dhinaca kale, haweenka bukaanka ah waxay qaataan qiyaasta Turinabol ee ugu hooseysa 1mg oo keliya maalintii iyo haddii kor u kaca waa inaysan dhaafin 2.5mg maalintii. Daroogadu waxay kordhisaa sifooyinka lab ah ee jidhka, sidaas darteed, dumarka isticmaala mar walba waxaa lagu dhiirigelinayaa inay qaataan qiyaasta hoose si ay uga hortagaan qaadsiinta.
Nolosha dheeraadka ah ee loo yaqaan 'steroids' kale, waxay ku jirtaa daroogooyinka yar yar oo leh nolol badh ka mid ah saacadaha 16. Isticmaalidda steroids kale waa inaad qaadataa qiyaasta sida 2 ama 3 mar maalintii taas oo aan ahayn kiis marka la isticmaalayo Turinabol. Waxaad u baahan tahay keliya inaad qaadato qiyaastaada hal mar maalintii, waadna fiicantahay inaad tagto.
Cirbado aan lahayn - sababtoo ah kuwa aan raaxo u laheyn steroids ee la isku duro, Turinabol waxay sameyn kartaa doorasho aad u fiican. Tani waa daroogo afka ah oo leh nolol aad u dheer, dad badan ayaa u sahlan oo raaxo leh in la isticmaalo maaddaama aad u baahan tahay inaad qaadato hal qiyaas maalintii. Natiijooyinku sidoo kale way cad yihiin markaa markaad la socotid qiyaastaada adoo raacaya cunto wanaagsan iyo jimicsi.
Waxaa lagu dhejin karaa noocyo kala duwan oo loo yaqaan 'anabolic steroids' -waxaa la yaabi karaa dad badan oo Turinabol ah oo awood u leh in ay la shaqeeyaan steroids kala duwan oo dheeraad ah sidaa daraadeed kuwa loo mudo. Xilliga la jarayo iyo xajmiga labadaba, waxaad Turinabol ku dhejin kartaa waxyaabo kale oo lagu duri karo natiijooyin wanaagsan. Ka qaybgal dhakhtarkaaga si uu isagu / iyadu u qaabeyn karo wareegga ugu fiican iyo nuqul sida ku cad natiijadaada la rabay.
Waxaa loo isticmaali karaa rag iyo dumarba labadaba ciyaalka asaasiga ah ayaa ka faa'iideysan kara isticmaalka Turinabol ee afka. Si kastaba ha noqotee, dumarka waxaa lagula talinayaa in ay isticmaalaan qiyaaso hooseeya si ay uga fogaadaan waxyeellooyinka fayadhowrka, laakiin waxaad xaqiijin kartaa helitaanka xoogga jirka iyo muruqyada adag ee adag iyo muruqyada adag. Bilowayaashu waa inay bilaabaan qiyaaso hooseeya oo dib loo hagaajin karo markay socdaan wareegyada xiga. Qaadashada qiyaaso ka badan inta lagugula talin karo waxay halis u tahay caafimaadkaaga mararka qaarkoodna waxay keeni kartaa waxyeelo daran.
Isticmaalka khatarta ah -ka laga bilaabo Turinabol oo muhiim u ah adduunka cayaaraha, daroogada ayaa ka soo jeeda caafimaadka. Bukaanno badan oo qaba cudurrada keena qalitaanka muruqa, waxay isticmaali karaan Turinabol si ay uga caawiyaan helitaanka iyo ilaalinta lafahooda iyo murqaha caafimaadkooda. Qaar ka mid ah macaamiisha Turinabol si ka badan markaa bukaannada laga yaabo inaanay ogeyn inay yihiin kuwa isticmaala steroid, laakiin waxay bixisaa natiijooyin dhawaaqa.
Soo iibso 4-Chlorodehydromethyltestosterone budada Buyaas.com
Roberts, A. (2016). Turjumaan afka ah ayaa lagu sharaxay. A + A.
Chester, N. (2014). Walxaha Anabolic. In Daroogada ciyaaraha(pp. 79-99). Routledge.
Cho, SH, Park, HJ, Lee, JH, Do, JA, Heo, S., Jo, JH, & Cho, S. (2015). Go'aaminta nacaybka anterolik-cunaha ee steroid ee daawooyinka been abuurka ah ee UHPLC-MS / MS. Daabacaadda falanqaynta daawooyinka iyo fayo-dhawrka biomedical, 111, 138-146.